01/25/14 ~ Myanmar Forward
ကမ္ဘာ့သရဲအခြောက်ဆုံးနေရာ စာရင်းမှာ ထိပ်ဆုံးက ဦးဆောင်နေတဲ့ အိမ်ဖြူတော်
Posted by drmyochit Saturday, January 25, 2014, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
အိမ်ဖြူတော်ဟာ အမေရိကန်သမ္မတနဲ့ သမ္မတကတော်တို့ နေထိုင်တဲ့ စံအိမ်အဖြစ် ၁၈၀၀ ပြည့် ခုနှစ်လောက် ကတည်းက စတင်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်သူမှန်းမသိတဲ့ ခြေသံတွေ၊ တံခါးခေါက်သံတွေ၊ တံခါးကို ထုရိုက်သံတွေ၊ ခွေးဟောင်သံတွေ နဲ့ ရုတ်တရက်ချမ်းစိမ့်စိမ့်ဖြစ်လာတဲ့ ခံစားမှု တွေကို အိမ်ဖြူတော်မှာ နေထိုင်တာဝန်ကျဖူးတဲ့ လူတိုင်း ခံစားခဲ့ဖူးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တခါတလေမှာ အိမ်ဖြူတော်ထဲမှာ လှည့်လည်သွားလာနေတဲ့ အဖြူရောင်အရိပ်သဏ္ဍာန်တွေ တွေ့ ရတယ်လို့ နာမည်ကြီးပါတယ်။ သူသေမှာကို ကြိုသိမြင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အမေရိကန် သမ္မတ အေဗရာဟင်လင်ကွန်း ရဲ့ ၀ိဥာဉ်ကို ခဏခဏ တွေ့ ရှိရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ တစ်ချို့ လူတွေအပြောအရ လင်ကွန်းရဲ့ ၀ိဥာဉ်ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံအတွက်အရေးကြီးတဲ့အချိန် ဆိုရင် ပင်မခန်းမကြီးနဲ့ လင်ကွန်းအိပ်ခန်းတစ်လျှောက်မှာ တွေ့ ရှိရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီ့အိပ်ခန်းဟာ လင်ကွန်းသမ္မတသက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံး သူ့ ရုံးခန်းအဖြစ်ပါ အသုံးပြုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ကာလအတွင်းမှာ လင်ကွန်းအိပ်ခန်းမှာ ခေတ္တတည်းခိုခဲ့တဲ့ ဗြိတိသျှဝန်ကြီးချုပ် ၀င်စတန်ချာချီ ကိုယ်တိုင် လင်ကွန်း ၀ိဥာဉ်ကို မြင်တွေ့ ခဲ့ရတယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ ချာချီဟာ ညတစ်ညမှာ လင်ကွန်းဝိဥာဉ်ကို မြင်ခဲ့ရပြီး နောက် အဲဒီ့အိပ်ခန်းမှာ ဆက်နေဖို့ ငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်ထပ် ၀ိဥာဉ်တစ်ခုကတော့ အိမ်ဖြူတော်မှာ ပထမဆုံးနေထိုင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး အဘီဂယ်လ် အဒမ် ရဲ့ ၀ိဥာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမစတင်ပြောင်းရွှေ့ လာတဲ့အချိန်မှာ အိမ်ဖြူတော်ဟာ အပြီးသတ်ဆောက်လုပ်ရခြင်း မရှိသေးလို့သူမဟာ ဆောက်လုပ်ဆဲ အရှေ့ ဘက်ခန်းမဆောင် မှာ နေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ မကြာခဏဆိုသလို သူမရဲ့ ၀ိဥာဉ်ကို အရှေ့ ဘက်ခန်းမဆောင် ဘက်မှာ လျှောက်သွားနေတာကို မြင်တွေ့ ကြပြီး သူမရဲ့ လက်ထဲမှာလည်း အ၀တ်လျှော်ဖို့ အတွက် အ၀တ်ဟောင်းတွေကို ပွေ့ ပိုက်ထားတယ်လို့သူမ၀ိဥာဉ်ကို မြင်တွေ့ ခဲ့ကြသူတိုင်းက တညီတညွတ်တည်းဆိုပါတယ်။
ဒီအဖြစ်အပျက်တွေတင်မက နောက်ထပ် ၀ိဥာဉ်ပေါင်းများစွာလည်း အိမ်ဖြူတော်မှာ ရှိနေတယ်လို့လူအများက ယုံကြည်ထားကြပါတယ်။ မကြာခဏမြင်တွေ့ ရတယ်ဆိုတဲ့ ၀ိဥာဉ်တွေထဲမှာ Annie Surratt ဆိုတဲ့ မိန်းမ၀ိဥာဉ်ကလည်း နာမည်ကြီးပါတယ်။ လင်ကွန်းသေဆုံးမှုမှာ ပါဝင် ပတ်သတ်တယ်လို့ စွပ်စွဲခံရပြီး အသတ်ခံခဲ့ရတဲ့ သူမရဲ့ အမေကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ အတွက် တစ်ချို့ ညတွေမှာ အိမ်ဖြူတော်တံခါးမကြီးကို လာခေါက်နေတယ်လို့ မြင်တွေ့ လိုက်ရသူတွေက ပြန်ပြောကြပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်တွေ တကယ်ဟုတ်သလား မဟုတ်သလားဆိုတာကတော့ ဘယ်သူမှ သက်သေမပြနိုင်ကြသေးဘဲ အင်္ဂလန်ဝန်ကြီးချုပ် ၀င်စတန်ချာချီလို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးက အတည်ပြုပြောကြားခဲ့တယ်ဆိုတော့လည်း ၀ိဥာဉ်တွေခြောက်လှန့် တဲ့နေရာတွေထဲမှာ နာမည်အကြီးဆုံး နေရာတစ်ခု အဖြစ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
(၁၁)လသားကလေးကို သေမတတ်ရိုက်နှက်ပြီး သူကိုယ်တိုင်နဲ့တွဲ ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်မိခင် ကို ထောင်ဒဏ် တစ်သက် ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။
မိခင်ဖြစ်သူဟာ အသက်၂၅နှစ်အရွယ်ရှိ Emma Wilsonဖြစ်ပြီး ကလေးကတော့ Callum Wilson ဖြစ်ပါတယ်။ Emma Wilsonဟာ Callumလေးကို အသေရိုက်နှက်တာကြောင့် Callumလေးဟာ အမြင်အာရုံကွယ်၊ အရိုး (၁၁)ချောင်းကျိုးသွားပြီး ကုမရတဲ့ ဦးနှောက်ထိခိုက်မှုလည်း ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ရိုက်နှက်တာ ကြမ်းလွန်းလို့ အောက်ထပ်က မျက်နှာကျက်တောင် တုန်ခါနေခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Callum လေးရဲ့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေဟာ Callumရဲ့ အစ်ကို (နှစ်နှစ်သား)က မနာလိုလို့လုပ်တာလို့ဆိုပြီး ကလေးကို အပြစ်တင်ဖို့ ကြိုးစားပါသေးတယ်။
Emma Wilsonကို ပထမတော့ ထောင်ဒဏ် ၁၄နှစ် အနည်းဆုံးဆိုပြီး ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ Old Baileyမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ တရားခွင် ၅ပတ်လုံး Emma Wilsonဟာ ဘာခံစားမှ မပြခဲ့ဘူးလို့ တရားသူကြီး Stephen Kramer QC ကပြောပါတယ်။
နောက်တော့ Callumလေး အသည်းအသန် ဝေဒနာခံစားနေရတယ်ဆိုတာကို တရားရုံးက ကြားခဲ့ပါတယ်။ နောက်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်မှာပဲ Callumလေးဟာ သေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီ့ရက်သတ္တပတ်တွေ အတွင်းမှာ ကလေးနဲ့သူ့ရဲ့ “မတိုင်ခင်” နဲ့ “နောက်ပိုင်း” ဆိုပြီး ပုံတွေတွဲရိုက်နေတော့တာပါပဲ။
“နောက်ပိုင်း” ပုံတွေမှာတော့ Emma Wilson ဟာ သွားပေါ်အောင်ရယ်ထားပြီး သူမဘေးမှာတော့ မျက်နှာမှာ အပြင်းအထန် ဒဏ်ရာရထားတဲ့ ငိုနေတဲ့သားငယ်ကို တွေ့ရပါတယ်။
“မင်းဟာ ကောင်းမွန်တဲ့၊ ချစ်စဖွယ်ကောင်းတဲ့၊ အထောက်အပံ့ရတဲ့ မိသားစုကြီးက လာခဲ့တာပါ။ သားနှစ်ယောက် ရှိတဲ့နေရာမှာ တခြားသားတစ်ယောက်အတွက် မိခင်ကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ Callum လေးကိုတော့ အကြောင်းတချို့ကြောင့် ပစ်ပယ်ခဲ့တယ်။ ကလေးနှစ်ယောက်ကို စောင့်ရှောက်ရတာ မနိုင်နင်းဘူးဆိုလည်း မင်းမိသားစုနဲ့ ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေ ရှိနေတာပဲ။ တရားခွင်တလျှောက်လုံးလဲ ဘာစိတ်ခံစားချက်မှ မပြဘူး။ ဒီအမှုမှာ အဲ့ဒါ ပြဿနာအသွင်တစ်ခုပဲပေါ့။”လို့ တရားသူကြီးက Emma Wilson ကိုပြောခဲ့ပါတယ်။
Posted by drmyochit Saturday, January 25, 2014, under အနုပညာ | No comments
ဟာဝိုင်ယီ လူမျိုးများ၏ အသက်ရှည်အောင် နေထိုင်နည်းများ
Posted by drmyochit Saturday, January 25, 2014, under ကျန်းမာရေး | No comments
ဟာဝိုင်ယီ လူမျိုးတွေဟာ အမေရိက တိုက်မှာ အသက်ရှည်ဆုံး လူမျိုးတွေ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေနဲ့ နှလုံးသွေးကြော ရောဂါကြောင့် သေဆုံးနှုန်း အနည်းဆုံး ဖြစ်ပြီး အဝလွန်နှုန်းနဲ့ ဆေးလိပ် သောက်နှုန်း ဟာလည်း သိသိသာသာ နည်းပါးနေတာကြောင့် ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေ နည်းသွားတာလို့ သိရပါတယ်။အသက်ရှည်ရှည် နေနိုင်ဖို့ ဟာဝိုင်ယီ လူမျိုးတွေရဲ့ အမူအကျင့် ငါးမျိုးကို အောက်မှာ ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေး အမူအကျင့် (၁)
ဟာဝိုင်ယီ လူမျိုးတွေဟာ ငါးများများ စားပါတယ်
ငါးစားတာကြောင့် အသားဓာတ်တွေ ရရှိစေတဲ့ အပြင် နှလုံးသွေးကြော ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချနိုင်တဲ့ အိုမီဂါသရီး ဖက်တီးအက်စစ်လည်း ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ငါးသေတ္တာ၊ ငါးတန်၊ ငါးကြင်း၊ ငါးမြင်းနဲ့ ငါးသလောက်လိုမျိုး ငါးတွေမှာ အိုမီဂါသရီး များများ ပါဝင်ပြီး မာကျူရီ ပါဝင်မှု အဆင့်လည်း နည်းတာကြောင့် အနည်းဆုံး တစ်ပတ်ကို နှစ်ကြိမ် ငါးစားပေးပါ။
ကျန်းမာရေး အမူအကျင့် (၂)
သူတို့ဟာ လတ်ဆတ်တဲ့ သစ်သီးနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက် များများ စားပါတယ်။ ဟာဝိုင်ယီ လူမျိုး အများစုဟာ နေ့စဉ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ လိုအပ်ချက် ဖြစ်တဲ့ သစ်သီးနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ငါးပုံထက် ပိုစားလေ့ ရှိကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဝလွန်တာနဲ့ ကင်ဆာလိုမျိုး ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေ ဖြစ်နိုင်ခြေ အရမ်း နည်းသွားပါတယ်။
လတ်ဆတ်တဲ့ သစ်သီးတွေ ဖြစ်တဲ့ ခရမ်းချဉ်သီး၊ သင်္ဘောသီး၊ ဖရဲသီး၊ နာနတ်သီးနဲ့ သရက်သီးတွေ များများ စားပေးပါ။ တောက်ပတဲ့ အရောင်ရှိတဲ့ သစ်သီးတွေမှာ ကင်ဆာကို တွန်းလှန်နိုင်တဲ့ ဓာတ်တိုး ဆန့်ကျင် ပစ္စုည်းတွေ များများ ပါဝင်လို့ပါ။ ကန်စွန်းရွက်၊ ဟင်းနုနယ်၊ ဘူးညွန့်နဲ့ ကိုက်လန်လိုမျိုး အစိမ်းရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေလည်း စားပါ။
ကျန်းမာရေး အမူအကျင့် (၃)
သူတို့ဟာ ဘယ်တော့မှ အလောတကြီး လှုပ်ရှားတတ်သူတွေ မဟုတ်ပါဘူး
စိုးရိမ်ပူပန်မှု များလွန်းတဲ့ ဘဝနေထိုင်မှု ပုံစံကြောင့် နှလုံးရောဂါက စပြီး စိတ်ကျရောဂါ အထိ ရောဂါအမျိုးမျိုး ဖြစ်နိုင်ခြေ များပါတယ်။ ဟာဝိုင်ယီ လူမျိုးတွေဟာ ဘယ်တော့မှ အလောတကြီး လှုပ်ရှားတတ်သူတွေ မဟုတ်ပါ ဘူး။ အေးအေးဆေးဆေး နေထိုင်တတ်ပြီး စိုးရိမ်ပူပန်မှု နည်းတတ် သူတွေပါ။
သင်ဟာ ဖိစီးမှုများတဲ့ အခြေအနေမှာ ရှိနေရင် စိတ်ဖြေလျှော့နည်း ဒါမှမဟုတ် ပျော်ရွှင်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ အသုံးပြုပါ။ ခြံထဲက ပန်းပင်တွေကို ပြုပြင်တာ ဒါမှမဟုတ် သင့်ခွေးတွေနဲ့ ဆော့ကစားတာလိုမျိုး လုပ်ပါ။ ဒုတိယ အနေနဲ့ ဖြည်းဖြည်းနဲ့ အသက်ပြင်းပြင်း ရှူပါ။ သင့်ဦးနှောက်ကနေ စိတ်ကို ငြိမ်းချမ်းစေမယ့် ဘီတာ Endorphins တွေကို ပိုထုတ် နိုင်အောင်လို့ပါ။
ကျန်းမာရေး အမူအကျင့် (၄)
မိသားစုဝင် အချင်းချင်း နွေးထွေးမှု ရှိကြပါတယ်
ဟာဝိုင်ယီမှ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းသော မိဘတွေနဲ့ သူတို့ ကလေးတွေဟာ သူတို့ အဘိုးအဘွားနဲ့ အနည်းဆုံး တစ်ပတ် တစ်ကြိမ် တွေ့ဆုံလေ့ ရှိကြပြီး ဟာဝိုင်ယီ မိသားစု လေးပုံသုံးပုံခန့်ဟာ တစ်ပတ်ကို အနည်းဆုံး ငါးကြိမ်ခန့် ထမင်း အတူတူ စားကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မိသားစုဝင် အချင်းချင်း နွေးထွေးမှု ရှိကြတာကြောင့် နှလုံးရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေ နည်းပြီး ခုခံအားစနစ် သန်စွမ်းကာ အသက်ရှည်အောင် ကူညီနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မိသားစုနဲ့ အမြဲတမ်း ညစာ အတူတူ စားပါ။ အကယ်၍ သင်ဟာ မိသားစုနဲ့ ခွဲနေရသူ ဖြစ်ရင် အနည်းဆုံး တစ်ပတ် တစ်ကြိမ် ဖုန်းပြောပါ။
ကျန်းမာရေး အမူအကျင့် (၅)
နေရောင်ခြည်ကို ကြိုက်နှစ်သက်တယ် ဆိုပေမယ့် သူတို့ဟာ နေပူရှိန် ပြင်းလွန်းတဲ့ မနက် ၁ဝ နာရီနဲ့ ညနေ ၄ နာရီကြားမှာ အပြင် မထွက်ပါဘူး။ နေရောင်ခြည်ခံဖို့ အိမ်ပြင် ထွက်ရင်လည်း နေရောင်ကာ လိမ်းဆေး လိမ်းပြီး၊ အနား အပြားကြီးပါတဲ့ ဦးထုပ် ဆောင်းကာ လုံခြုံတဲ့ အဝတ်အစားကို ဝတ်လေ့ ရှိကြပါတယ်။
သင်လည်း နေခြည်နုနု ရအောင် မနက် ၁ဝ နာရီ မထိုးခင်နဲ့ ညနေ ၄ နာရီ နောက်ပိုင်း အိမ်ပြင် ထွက်ပါ။ SPF အနည်းဆုံး ၃၀ ပါဝင်တဲ့ နေရောင်ကာ လိမ်းဆေး အသုံးပြုကာ နေကာ မျက်မှန်နဲ့ လုံခြုံတဲ့ အဝတ်အစားကို ဝတ်ဆင်ပြီးမှသာ နေခြည်နုနု ခံယူပါ။
Posted by drmyochit Saturday, January 25, 2014, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ကလေးခရိုင်း၊ မင်းကင်မြို့၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်တွင် ယခုလ၂၁ ရက် ညနေ ၅ နာရိအချိန်က ကွမ်းယာရောင်း သူလေး၏ နုတ်ဆက်အပြုံးကို ကွမ်းယာလာဝယ်သူက စိတ်မထိန်းနိုင်ဘဲ ပွေ့ဖက် နမ်းရှုံ့လိုက် သည့်အတွက် မင်းကင်းမြို့မရဲ စခန်းက ကွမ်းယာဝယ်သူကို အမှုဖွင့်အရေးယူလိုက်ကြောင်း တာဝန်ကျ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက ပြောသည်။
အသက်(၂၉)နှစ်အရွယ် မ.... ဆိုသူသည် သူမ၏ ဈေးဆိုင်၌ ဈေးရောင်းနေစဉ် မင်းကင်းမြို့နယ်၊ လက် သမား ချောင်ကျေးရွာနေ ကို.... အသက်(၂၃)နှစ်ဆိုသူမှ ထိုဈေးဆိုင်သို့ ကွမ်ယာ ငါးကျပ်ဖိုး ၀ယ်ယူရန်ရောက် ရှိလာခြင်း ဖြစ်သည်။
ထို့နောက် ကွမ်းယာရောင်းသူမှ ကွမ်းများကိုယာနေချိန်တွင် ထိုဈေးဆိုင်ရှေ့မှ ဆိုင်ကယ်စီး၍ ဖြတ်သန်း သွားသည့် ကွမ်းယာရောင်းသူ၏ အသိမတ်ဆွေများကို ကွမ်းယာရောင်းသူမှ ပြုံးပြ၍နုတ်ဆက်နေစဉ် ကွမ်းယာ လာရောက်ဝယ်ယူသူမှ ကွမ်းယာရောင်းသူအား ပွေ့ဖက် နမ်းရှုံ့ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရဲစခန်းက မှတ်တမ်းများရယူထားသည်ဟု သိရသည်။
အသည်းနဲ့ ကျောက်ကပ်လိုမျိုး ကလီစာတွေဟာ Cadmium ခေါ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဒုက္ခပေးတဲ့ သတ္တု ဓာတ်တွေ ပေါကြွယ်ဝတဲ့ အစာတွေပါ။ သူတို့ကိုစားမိရင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ တစ်သျှူးအတွင်းမှာ စုဆောင်းနေ တတ်ပါတယ်။ ဒီ Cadmium တွေနဲ့ ထိတွေ့သူတွေဟာ သားမြတ်ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေ ၂၇ ရာခိုင်နှုန်း ပိုများတယ်လို့ ကယ်လီဖိုးနီးယား တက္ကသိုလ်မှ သုတေသီတွေက တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Cadmium ဟာ ပုံမှန် မဟုတ်တဲ့ ဆဲလ်တွေကို ပိုမိုထကြွစေပြီး ကြီးထွားမှုကိုလည်း မြန်ဆန်စေကာ ရောဂါပျံ့နှံ့ နှုန်းလည်း မြန်ဆန်နိုင်ပါတယ်။
လက်တစ်ဆုပ်စာ ဆီးသီးခြောက်ကို နေ့စဉ် စားသုံးတာကြောင့် သားမြတ်ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း အထိ လျှော့ချနိုင်တယ်လို့ သုတေသန ပြုလုပ်ချက်အရ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ခွက်တစ်ဝက်စာ ဆီးသီးခြောက်မှာ ဘီတာကယ်ရိုတင်း ၂၃၄၂ အိုင်ယူ ပါဝင်ပါတယ်။ ဘီတာကယ်ရိုတင်းဟာ ဗီတာမင်အေ အမျိုး အစားဖြစ်ပြီး ကင်ဆာကို တွန်းလှန်နိုင်တဲ့ ခုခံအား ဆဲလ်ထုတ်လုပ်မှုကို ၃၃ ရာခိုင်နှုန်းထိ မြင့်တက်စေနိုင် ပါတယ်။ ကန်စွန်းဥ၊ ဟင်းနုနယ်ရွက်၊ မုန်လာဥနီ ဒါမှမဟုတ် သခွားသီး ခွက်တစ်ဝက်စာ ကို လည်း ဆီးသီးခြောက်အစား စားသုံးနိုင်ပါတယ်။
၁။ အနီရောင်ဝိုင်ကို နေ့စဉ်တစ်ခွက် သောက်တာကလည်း သားမြတ်ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချနိုင် ပါတယ်။ အီစထရိုဂျင် အဆင့်တွေကို နိမ့်ကျစေပြီး တက်စထရိုစတီရုန်း အဆင့်ကို မြင့်တက်စေနိုင်လို့ပါ။
GridinSoft Trojan Killer 2.2.1.0 + Patch (Full Version) 63 Mb !!!
Posted by drmyochit Saturday, January 25, 2014, under Antivirus | No comments
မိမိကွန်ပြူတာလုံခြုံရေးအတွက် Trojan Killer ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။သုံးဖူးသူတွေသိမှာပါ။မိမိကွန်ပြူ
တာမှာဝင်ရောက်ဖျတ်စီးမယ့် Adware, Spyware, Remote Access Trojans, Internet Worms and other malware တွေကိုလွယ်ကူစွာရှင်းလင်းပေးမယ့် Trojan Killer ပါ။လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တာတွေတော့
အများကြီးပါ။အောက်မှာဖတ်ကြည့်ပါ. Full ဖြစ်စေဖို့အတွက် Patch ဖိုင်လေးကိုထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
သြစတြေးလျအိုးပင်းတင်းနစ် အမျိုးသမီးပွဲစဉ်တွင် တရုတ်တင်းနစ်မယ် လီနာ ဗိုလ်စွဲ
Posted by drmyochit Saturday, January 25, 2014, under အားကစားသတင်း | No comments
အသက် ၃၁ နှစ်အရွယ် လီနာသည် သြစတြေလျးအိုးပင်းဆုဖလားကို ပထမဆုံးအကြိမ် ရယူနိုင် ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
သြစတြေးလျအိုးပင်း တင်းနစ်ပြိုင်ပွဲ အမျိုးသမီးတစ်ဦးချင်း ဗိုလ်လုပွဲစဉ်ကို ယနေ့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့ရာ တရုတ်တင်းနစ်မယ် လီနာက ဆလိုဗက်ကီးယားသူ ဒိုမီနီကာ စီဘယ်ကိုဗာကို ၇-၆၊ ၆-၀ ဖြင့် အနိုင်ရရှိကာ ဆုဖလားဆွတ်ခူးသွားသည်။ အသက် ၃၁ နှစ်အရွယ် လီနာသည် သြစတြေလျးအိုးပင်းဆုဖလားကို ပထ မဆုံး အကြိမ် ရယူနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်နှင့် ယမန်နှစ် သြစတြေးလျအိုးပင်းတွင် ဒုတိယနေ ရာဖြင့်သာ ကျေနပ်ခဲ့ရသည်။
လီနာသည် ၂၀၀၁ ခုနှစ် သြစတြေးလျအိုးပင်း ဗိုလ်လုပွဲတွင် ကမ်ကလိုက်စတားကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး ဒုတိယ ဆုသာ ရရှိခဲသည်။ ထို့အတူ ယမန်နှစ် ပြိုင်ပွဲတွင်လည်း ဗိုလ်လုပွဲတွင် ဗစ်တိုးရီးယား အဇာရင်ကာကို ရှုံးနိမ့် ခဲ့သည်။ ယခုနှစ်တွင်မူ ရှာရာပိုဗာ၊ ဆရီနာဝီလျံ၊ အိုင်ဗန်နိုဗစ်၊ အဇာရင်ကာ အစရှိသည့် နာမည်ကြီး တင်းနစ် မယ်များ ပြိုင်ပွဲမှ စောစီးစွာ ထွက်ခွာခဲ့ရခြင်းကလည်း လီနာအတွက် ဆုဖလားဆွတ်ခူးနိုင်ရေး အခွင့် အလမ်းကောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။
လီနာသည် ယခုနှစ် သြစတြေးလျအိုးပင်း ဆုဖလားကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့သဖြင့် ကမ္ဘာ့တင်းနစ်အားကစားတွင် အဓိကကျသော ဂရင်းဆလင်းပြိုင်ပွဲ ဆုဖလားကို ၂ ကြိမ် ရရှိခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ပြင်သစ် အိုးပင်း ဆုဖလားကိုလည်း ရရှိထားသည်။ လီနာနှင့် ဗိုလ်လုပွဲတွင် တွေ့ဆုံယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရသည့် အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ် ဆလိုဗက်ကီးယား တင်းနစ်မယ်လေးမှာ ဂရင်းဆလင်းပြိုင်ပွဲကြီးများ၏ ဗိုလ်လုပွဲ စဉ်သို့ ပထမဆုံးအကြိမ် တက်ရောက်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။
(၂၀၁၄-၂၀၁၅)ပညာသင်နှစ်မှစတင်ပြီး နိုင်ငံခြားဖြစ်စက္ကူများဖြင့် ပြောင်းလဲပုံနှိပ်သွားမည့် ကျောင်းသုံးစာအုပ်များ
(၂၀၁၄-၂၀၁၅)ပညာသင်နှစ်ကစပြီး နိုင်ငံခြားဖြစ်စက္ကူများနဲ့ ကျောင်းသုံးစာအုပ်များကို
ပြောင်းလဲ ပုံနှိပ် သွားရန် ရှိတယ်လို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းဝေးမှ သတင်းများအရသိရပါတယ်။အခုလိုဆောင်ရွက်ရာမှာ(၂၀၁၁-၂၀၁၂)ပညာသင်နှစ်မှစပြီး အခြေခံပညာမူလတန်းအဆင့် ကျောင်းသုံးစာအုပ်များအား နိုင်ငံတော်မှအခမဲ့ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒီလိုထောက်ပံ့ပေးမှုတွေအပြင် ကျောင်းသုံးစာအုပ်အဖုံးအား ပြည်တွင်းဖြစ် Local Duplex အစားမူလတန်းအဆင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ စိတ်ဝင်စားမှုရှိလာစေရန်အတွက် နိုင်ငံခြားဖြစ်စက္ကူ Foreign Duplex ကို ပြောင်းလဲပုံနှိပ်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။
အဆိုပါပုံနှိပ်ထုတ်လုပ်မှုတွေအပြင် (၂၀၁၄-၂၀၁၅)ပညာသင်နှစ်မှလည်းစတင်ပြီး အခြေခံပညာမူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်းကျောင်းသုံး စာအုပ်များကိုအတွင်းသား စက္ကူအား နိုင်ငံခြားဖြစ်စက္ကူ Wood Free (ဖြူ/ချော)နဲ့ စာအုပ်အဖုံးအား နိုင်ငံခြားဖြစ် စက္ကူ Art Card (ကြွေချော)ဖြင့် ပြောင်းလဲပုံနှိပ်ထုတ်လုပ်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။
ဒီလိုပုံနှိပ်ထုတ်လုပ်ရာမှာလည်း ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ (၂၀၁၄-၂၀၁၅)ပညာသင်နှစ်စတင်ပြီး အခြေခံပညာမူလတန်းအဆင့် ကျောင်းသုံးစာအုပ်(၂၂)မျိုးကို ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့အပ်နှံပြီး အလယ်တန်းအဆင့်နှင့် အထက်တန်းအဆင့် ကျောင်းသုံးစာအုပ်(၅၉)မျိုးကို ပုဂ္ဂလိကပုံနှိပ်တိုက်များကိုအပ်နှံကာ အရည်အသွေးမြင့် နိုင်ငံခြားစက္ကူနဲ့ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။
UWSA ``၀´´ အဖွဲ့မှ လားဟူ၊ အင်၊ လွယ်တိုင်းရင်းသားများအား အတင်းအဓမ္မ လူသစ်စုဆောင်းနေ
မိုင်းကာဒေသအတွင်းရှိ ကျေးရွာများ၌ နေထိုင်သော လားဟူ၊ အင်၊ လွယ်တိုင်းရင်းသားများအား ဇန်န၀ါရီ ဒုတိယပတ်မှစ၍ ``၀´´ ပြည်သွေး စည်းညီညွတ်ရေးတပ်မတော် UWSA အဖွဲ့မှ အတင်းအဓမ္မ လူသစ်စု ဆောင်းနေမှုကြောင့် အခြားမြို့ရွာများသို့ ပြောင်းရွှေ့ရန် စီစဉ်နေရကြောင်း ယင်းဒသခံများ ထံမှ သိရသည်။
UWSA ``၀´´အဖွဲ့မှ အဆိုပါ ကျေးရွာများ၌ အိမ်ထောင်စု ၁ စုလျှင် ယောက်ျားတစ်ဦးနှုန်း``၀´´ တပ်ဖွဲ့ဝင် အဖြစ် မ၀င်မနေရ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်ဟုပြောကာ အတင်းအဓမ္မလာရောက် ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်နေ ကြောင်း ဒေသခံလားဟူလူမျိုးကို ကျမူးက ဆိုသည်။
``UWSA `၀´ နယ်မြေဆိုတော့ သူတို့ အနိုင်ကျင့်တာကို ခံနေရတာပေါ့၊ နေချင်စိတ်လည်း မရှိတော့ပါဘူး။ အစိုးရအုပ်ချုပ်တဲ့ နယ်မြေထဲကို ပြောင်းဖို့ လုပ်နေကြပါတယ်´´ ဟု ယင်းက ဆက်လက်ပြောကြားသွားသည်။
အဆိုပါတိုင်းရင်းသားအနေဖြင့် `၀´၏ ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွင် အတင်းအဓမ္မလူသစ်စုဆောင်းမှုများကြောင့် မနေလိုတော့ဘဲ အခြားမြို့ရွာများသို့ ပြောင်းရွှေ့ချင်သော်လည်း UWSA `၀´ခေါင်းဆောင်များ၏ ထိန်းချုပ်မှု ကြောင့် အခက်
``ပြောင်းချင်ရင် ပြောင်းလို့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် အိမ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်သမျှ ပစ္စည်းတွေ ဘာတစ်ခုမှ ယူမသွားရဘူး ဆိုတော့ ကျွန်မတို့က ဘယ်လိုလုပ်ပြောင်းလို့ရတော့မလဲ။ ဘာပစ္စည်းမှ မပါဘဲနဲ့ ဘယ်နားသွားနေရမလဲ´´ ဟု ဒေါ်နန်းအွန်က ပြောသည်။
UWSA ``၀´´အဖွဲ့မှ ရွာသားများပြောင်းရွှေ့ပါက မည်သည့်ပစ္စည်းမှ ယူဆောင်ခွင့်မပြုကြောင်း အမိန့် ထုတ်ထားသဖြင့် ရွာသူ ရွာသားများအနေဖြင့် အတင်းအဓမ္မလူသစ်စုဆောင်းမှု ကို ရှောင်လွှဲ လို၍ ပြောင်းရွှေ့ လိုသော်လည်း ``၀´´ ခေါင်းဆောင်များ၏ အနိုင်ကျင့်ကန့်သတ်ထားမှုကြောင့် အခက်အခဲဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိ ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ရန်ကုန်အပါအဝင် မြို့ကြီးအချို့ ဇန်နဝါရီ နောက်ဆုံးပတ်တွင် အအေးပေါ့မည်
Posted by drmyochit Saturday, January 25, 2014, under မိုးလေ၀သသတင်း,ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
ကမ္ဘာ့မြောက်ဘက်ခြမ်း ဒေသများတွင် ဆောင်းရာသီကာလ အားကောင်းပြီး အအေးလွန်ကဲမှု ဖြစ်စဉ် များကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပါ အအေးပိုနေရာမှ ဇန်နဝါရီ လနောက်ဆုံးပတ်တွင်မူ ရန်ကုန် အပါအဝင် မြို့ကြီး အချို့တွင် အအေးပေါ့မည် ဖြစ်ကြောင်း မိုးလေဝသပညာရှင် ဒေါက်တာထွန်းလွင်က ပြောကြား သည်။
ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့တို့တွင် ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းအတွင်းက ညအပူချိန်များ ပျမ်းမျှအပူချိန်အောက် လျော့နည်း ကာ အအေးပိုနေရာမှ ဇန်နဝါရီလ နောက်ဆုံးပတ်တွင်မူ ပျမ်းမျှ အပူချိန်ထက် ၃ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ ၅ စင်တီဂရိတ်အထိ မြင့်တက်လာပြီး အအေးလျော့နည်းဖွယ် ရှိကြောင်း ၎င်းကခန့်မှန်း ပြောဆိုသည်။
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ နေပြည်တော်၊ ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့က ပျမ်းမျှအပူချိန်အောက် ကျဆင်းရောက်ရှိကာ အအေးပိုခဲ့ကြောင်း မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနက ဇန်နဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်သည်။
“ပင်လောင်း၊ လွိုင်လင်၊ ဟားခါးနဲ့ ပြင်ဦးလွင်မြို့တွေမှာတော့ ဒီရက်ပိုင်း တစ်ရက်နှစ်ရက်မှာတော့ အအေး ဆက်ပိုနိုင်သေးတယ်” ဟု အဆိုပါဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောဆိုသည်။
" ယာဉ်မတော်တဆမှုအတွက် သတိပေးနေသော်လည်း ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်း၌ ယာဉ်တိမ်းမှောက် သေဆုံးမှု လျော့နည်းလာခြင်းမရှိ"
ယာဉ်မတော်တဆ ဖြစ်နိုင်သည့်အတွက်သတ်မှတ်အရှိန်နှုန်းဖြင့်မောင်း နှင်ကြရန် သတိပေးထားသော် လည်း အမြန်လမ်းတွင် ကားတိမ်းမှောက်၍ သေဆုံး မှုလျော့ နည်းလာခြင်း မရှိဟု အမြန်လမ်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးကြီး ဦးနေဝင်း က ပြောသည်။
”လစဉ် အမှုက ၁၅၊ ၂ဝ၊ ၂၅ ဒီလို ပဲသွားနေတယ်။ လျော့သွားတယ်ရယ် လို့ မရှိဘူး” ဟု ရဲမှူးကြီးက ပြောသည်။
၂ဝဝ၉ ခုနှစ် မတ်လတွင် ကား စတင် ဖြတ်သန်းခွင့်ပြုပြီးနောက် ကား ဖြတ်သန်းမောင်းနှင်ခဲ့သည့် ကြိမ်ရေ ၈ သန်းရှိခဲ့သည်။
ဖြစ်စဉ်များ အားလုံးကို ခြုံ၍ ကြည့်ပါက ယာဉ်မောင်းများ၏ ပေါ့ဆမှု ကြောင့်ဖြစ်ပြီး အရှိန်ပြင်းစွာမောင်းနှင် ခြင်းကြောင့်လည်း ပါဝင်သည်ဟု ရဲမှူး ကြီးက မှတ်ချက်ပြု သည်။
ရဲမှူးကြီး နေဝင်းက ”ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ဥပဒေအရ ကားတွေကို စည်းကမ်း တကျ လွပ်လပ်စွာ သွားခွင့်ပေးထားပါ တယ်။ သို့သော်လည်း စည်းကမ်းမဲ့ ဖြစ် တာတွေေ ကြာင့်အမှုတွေက မလျော့သေး ဘူး” ဟု ပြောသည်။
၁ နာရီ ကီလိုမီတာ ၁ဝဝ ကျော် ပါက အန္တရာယ်ရှိနိုင်ကြောင်း သတိပေး ဆိုင်းဘုတ်များဖြင့် ပြသခြင်း၊ သတ်မှတ် အရှိန်အတိုင်း မောင်း/မမောင်း ကို ရွေ့ လျားစက် များဖြင့် လိုက်စစ်ခြင်းများ ကို ရဲတပ်ဖွဲ့က အမြန်လမ်း၌ ပြုလုပ် သော်လည်းလုံလောက်မှုရှိပြီဟု မပြော နိုင်သေးကြောင်း ၄င်းက ထပ်လောင်း ဆိုသည်။
”ရပ်သင့်တဲ့အချိန်၊ နားသင့်တဲ့အချိန် တွေမှာရပ်နားရပါ့မယ်။ စွတ်မောင်းတော့ တာယာတွေမခံနိုင်ဘူး။ ဒါနဲ့ မှောက် ရော” ဟု၎င်းကဖြည့်စွက်ပြောသည်။
အမြန်လမ်းရဲတပ်ဖွဲ့ စာရင်းအရ ယာဉ်မတော်တဆ ဖြစ်မှုတွင် ယာဉ်ကြီး ထက် ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်ငယ်များက အများ ဆုံးဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရသည်။
ထိုထဲတွင် အရှိန်ပြင်းမောင်းမှု ကြောင့် ရှေ့ကားကို နောက်ကားမှ တိုက်သောအမှုမှာတစ်လလျှင် ၃ မှုနှုန်း ခန့်လည်း ရှိနေသည်။
ကမ္ဘာ့သရဲအခြောက်ဆုံးနေရာ စာရင်းမှာ ထိပ်ဆုံးက ဦးဆော...
(၁၁)လသား ကလေးကို ရိုက်နှက်ပြီး သေမတတ်ဒဏ်ရာရနေတာကို...
ဟာဝိုင်ယီ လူမျိုးများ၏ အသက်ရှည်အောင် နေထိုင်နည်းမျ...
GridinSoft Trojan Killer 2.2.1.0 + Patch (Full Ver...
သြစတြေးလျအိုးပင်းတင်းနစ် အမျိုးသမီးပွဲစဉ်တွင် တရုတ...
UWSA ``၀´´ အဖွဲ့မှ လားဟူ၊ အင်၊ လွယ်တိုင်းရင်းသားမျ...
" ယာဉ်မတော်တဆမှုအတွက် သတိပေးနေသော်လည်း ရန်ကုန်-မန္တေ...